Ulwaphulo lwe-oksijeni - I-Optional Hyperbaric Treatment Chamber
Ulwaphulo lwe-oksijeni - I-HBOT yonyango lwe-oksijeni
ikhaya/Ulwaphulo lwe-oksijeni - I-HBOT yonyango lwe-oksijeni
Ulwaphulo lwe-oksijeni - I-HBOT yonyango lwe-oksijeniteknamfg2018-06-26T12:15:19+00:00
Iindidi ze-Hyperbaric I-Oxygen Treatment Chambers.
I-Chambery Hyperbaric Chamber
I-Mobile Hyperbaric Chamber
IDaving / Decompression Chamber
I-Tekna ikhiqiza i-Monoplace, Multiplace, i-Mobile, kunye ne-Transportable Hyperbaric Chambers kwiinkalo ezahlukeneyo zokudibanisa nayiphi na indlela yokuyila okanye iindleko.
I-Monoplace Hyperbaric Chambers zenzelwe ukunyanga isigulane esinye ngexesha. I-Chamber inxinzelelo nge-100% Oxygen. Isigulane se-HBOT siphefumula i-100% oksijini phantsi kwengcinezelo.
I-Multiplace I-Hyperbaric Chambers yenzelwe ukunyanga izigulane ezininzi ngexesha. I-Chamber ixinzeleleke kwiBanga leBanga lezeMpilo. Izigulane ze-HBOT ziphefumula i-100% i-oksijini phantsi kwengcinezelo nge-hood okanye imask system. I-Multiplace Chambers Chambers idinga iPhakheji ye-Duplex Medical Air Compressor kunye ne-Water Suppression System System (FSS).
I-Multiplace I-Hyperbaric Chambers nayo ineempawu ezongeziweyo ezifana nokukhanya kwe-fiber optic, iinkqubo zonxibelelwano kunye nokuzonwabisa, kunye ne-Units Controls Units (ECU's) zokunyamezela ngesigulane.
mobile Oxygen Hyperbaric IiNkqubo zeNkundla zivame ukwakhiwa kwi-trailer yezorhwebo okanye ipolatifti yeloli. IiChambers zeFowuni ziquka Multiplace Hyperbaric Chamber kunye nazo zonke izixhobo ezincedisayo ukuqhuba ikamelo elibheke kwiloli okanye i-trailer.
Zothutho Chamber of Hyperbaric Iinkqubo zivame ukwakhiwa kwisakhiwo sendlela. Amakamelo aThutho aquka i-Multiplace Hyperbaric Chamber kunye nazo zonke izixhobo ezincedisayo ukuba zisebenze ikamelo elikhutshwe kwisakhiwo se modular esithintekayo.
I-Hybrid 4000 Monoplace Hyperbaric Chamber
I-Hybrid 3200 Monoplace Hyperbaric Chamber
Umzekelo 6000 SL Multiplace Chamber Hyperbaric
Umzekelo 6000 DL Multiplace Chamber Hyperbaric
Umzekelo 7200 SL Multiplace Chamber Hyperbaric
Umzekelo 7200 DL Multiplace Chamber Hyperbaric
Umzekelo 8400 DL Multiplace Chamber Hyperbaric
Ithenda ehambayo yeThuthi yeHarperbaric
Ifowuni Yenza ezininzi kwiNkundla yeHyperbaric